Gorona del Viento dia mahavita mamatsy angovo 1.974 XNUMX amin'ny angovo azo havaozina | Green Renewable
Ny Nosy El Hierro indray dia ohatra iray amin'ny angovo azo havaozina. Ny orinasa herinaratra Gorona del Viento dia afaka namatsy ny nosy tamin'ny angovo azo havaozina ihany ny 25 Janoary ka hatramin'ny 12 Febroary tsy tapaka.
Ahoana no nahatanterahan'izany?
Nandritra ny taona lasa, ny orinasa miandraikitra ny toby famokarana herinaratra dia nanome toky fa 46,5% ny angovo lany ao El Hierro dia avy amin'ny loharano azo havaozina. Nanjary ampahany lehibe amin'ny fampidirana angovo eto amin'ny nosy ity orinasa mpamokatra herinaratra ity.
Miaraka amin'ny faharetan'ny 1.974 XNUMX ora, ny orinasa Gorona del Viento dia afaka namatsy ny nosy tamin'ny angovo azo havaozina ihany. Azo atao izany noho ny rivotra mahery nahatonga ny turbines rivotra hihetsika haingana sy lava kokoa.
Hatramin'ity taona 2018 ity, ny rivotra dia namela ny fidirana an-tsehatra amin'ny teknolojia fandotoana amin'ny fandrakofana ny mitaky 560 ora. Gorona del Viento dia afaka nahatratra herinaratra havaozina 20.234 5,8 megawatts, nampitombo ny fahafahany havaozina hatramin'ny XNUMX% raha oharina tamin'ny taona lasa. Mampiseho rakitsoratra ara-tantara vaovao eo amin'ny tontolon'ny fanavaozana azo havaozina.
Gorona del Viento dia nanomboka niasa tamin'ny fahaizany feno tamin'ny Jolay 2015 ary, nanomboka tamin'izay, izy io dia singa iray lehibe amin'ny fampidirana ny taranaka azo havaozina ao amin'ny rafitra herinaratra an'ny El Hierro.
Na dia tamin'ny 2015 aza dia tsy niasa afa-tsy tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona ny orinasa, dia nahavita nandrakotra 19,2% -n'ny fitakiana totaliny. Tamin'ny 2016 dia nahatratra 40,7% ary tamin'ny 2017 46,5%. Araka ny hita dia isan-taona ny angovo azo havaozina no azo. Talohan'ny namoronana ilay zavamaniry, tamin'ny 2014, angovo azo havaozina eto amin'ny nosy ka 2,3% amin'ny fitakiana herinaratra ihany no nahatonga izany.
Hatramin'ny nanombohany niasa, Gorona del Viento dia nanalavitra ny famoahana CO30.000 efa ho 2 taonina, ohatra iray harahina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Gorona del Viento dia mahavita mamatsy havaozina 1.974 XNUMX ora
EDP ​​Renovables dia hanome angovo azo havaozina ho an'i Nestlé any Etazonia